SomaliTalk.com » Dr. C/raxmaan Baadiyoow oo Sheegay inuu ka mid Yahay Murashaxiinta u Taagan Xilka Madaxnimo ee Soomaaliya
(Xilligii Qoriga Wuu Dhammaaday, Waxaa la Joogaa xilligii Aqoontu Talin lahayd)
Dr. C/raxmaan Macallin C/llaahi (Baadiyoow) oo ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa maanta sheegay inuu ka qaybgalayo Doorashada Madaxweynimo ee Soomaaliya oo lagu wado inay dhacdo bisha Ogoosto ee sannadkan.
“Sharaf weyn ayay ii tahay inaan u istaago tartanka Madaxweynimo ee Soomaaliya ka dhici doona dhawaan, si aan u badbaadiyo dalkeyga iyo dadkeyga,” ayuu yiri Dr. Baadiyoow oo ka hadlayay munaasabad uu kaga dhawaaqay Murashaxnimadiisa oo lagu qabtay Muqdisho.
Dalka Soomaaliya oo ku jira xilli kala guur ah ayaa lagu wadaa in bisha Ogoosto ee sannadkan ay ka dhacdo doorasho Madaxweynimo, taasoo ay u taagan yihiin aqoon-yahanno badan oo uu ka mid yahay Dr. Baadiyoow.
“Waxaan tiigsanayaa Soomaaliya oo yeelata xukun ka fog Musuqmaasuq, dadkeeduna ku wada nool yihiin nabad, isla markaana dariskeeda kula nool nabad,” ayuu mar kale yiri Dr. C/raxmaan Baadiyoow. Isagoo hadalkiisa raaciyay: “Waa Waajib Islaami ah iyo mid wadaniyadeed inaan isku sharraxo xilka Madaxweynimo ee dalkeyga.”
Munaasabadda oo ay ka qaybgaleen Xildhibaanno, aqoonyahanno, Arday, Haween, Salaadiin iyo marti-sharaf kale ayaa waxaa ka hadallo ka jeediyay mudanayaal ay ka mid yihiin, Prof. Maxamed Cumar Dalxa, Caasho Axmed Cabdalla, Maxamed Cabdi Yuusuf iyo kuwo kale.
“Haddii aan nahay kuwa u saaxiibka ah Cilmiga, Caqliga iyo Garaadka, waxaana rumeysannahay in Dr. C/raxmaan Baadiyoow uu noqdo isku keenaha shacabka Soomaaliyeed oo muddo 21-sano ka badan kala maqnaa,” ayuu yiri Suldaan Xasan Xaaji Maxamed (Guul-wade) oo ka hadlay Munaasabadda.
Xildhibaannadii iyaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay qabaan in Musharaxan uu yahay mid dalka iyo dadka badbaadin kara, sidoo kalena leh aqoon, karti iyo aqlaaq fiican oo uu howsha Madaxnimo ku gudan karo.
Sidoo kale, waxaa goobta ka hadlya C/waaxid Cilmi Goonjeex iyo C/llaahi Maxamed Shirwac, iyagoo sheegay inay qabaan inuu yahay shaqsi hoggaamin kara ummadda Soomaaliyeed, xilligii loo baahaana yimid.
Ugu dambeyn, Dr. C/raxmaan Baadiyoow wuxuu sheegay in Soomaalidu aysan u lahayn dhaqan inay is-faaniso, laakiin waxaan tuhunsanahay inaan ummaddeyda ka samatabixin karo xalaaddan ee ay hadda ku sugan yihiin; isagoo sheegay inuu rumeysan yahay in xilligii qoriga uu dhammaaday, lana joogo xilligii aqoontu ay talin lahayd